एक क्रुर तानाशाह: जस्ले विवाहकै दिन गरे आत्महत्या - Gokarna News from Nepal
एक क्रुर तानाशाह: जस्ले विवाहकै दिन गरे आत्महत्या
एजेन्सी– संसार जित्ने दम्भ राख्ने जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलरको अवसान शायद त्यति दुःखद ढंगले होला भनेर कमैले कल्पना गरेका थिए होलान । तर उनले मृत्युलाई यसरी अकल्पनीय ढंगले स्वीकारे , जस्ले उनमा कायरता पनि कुन हदसम्म थियो भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।
२५ अप्रिल १९४५ पछि हिटलरको जीवनमा मात्र एउटै बाटो थियो , स्वयं आफ्नै मृत्युको तयारी गर्नु । २५ अप्रिलमा उनले आफ्नो निजी अंगरक्षक हिंज लिंगेलाई बोलाएर भने ‘ जब म आफैले आफैलाई गोली हान्नेछु तब तिमीले मेरो मृत शरीरलाई चान्सलरी बगैचामा लगेर आगो लगाइदिनु,ताकी मलाई कसैले चिन्न नसकोस् , त्यसपछि तिमीले मेरो कोठामा भएको मेरो सैन्य पोशाक, कागज र सबै चिजवस्तु जो मैले प्रयोग गरेको छु,त्यस्लाई जलाइदिनु , मात्र अंटन ग्राफले बनाएको फ्रेडरिक महानको तैल चित्रलाई भने नछुनु जस्लाई मेरो ड्राइभरले मेरो मृत्यु पछि सुरक्षितरुपमा बर्लिन शहर भन्दा बाहिर लिएर जानेछ । ’
आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनमा हिटलर जमिन भन्दा ५० फिट मुनि बनाइएको बंकरमा काम गर्थे र त्यहीं सुत्थे पनि । कहिले काँही आफने प्यारो कुकुर ब्लांडीलाई खेलाउन मात्र उनी चान्सलरी बगैचामा जाने गर्थे । जहाँ चारै तिर बलमे ध्वस्त भएको घरका टुक्राहरु छरपष्ट थिए ।
को को थिए हिटलरसंग ?
हिटलर विहान ५ या ६ बजे सुत्न जान्थे र दिउँसो उठने गर्थे , हिटलरका निजी सचिव त्राउदी जुंगा अन्तिम क्षणसम्म उनीसंग बंकरमा रहेका थिए । बीबीसीलाई जुंगाले एक समय भनेका थिए ‘ अन्तिम दश दिन वास्तवमा नै हाम्रो लागि एउटा नराम्रो सपना सरह थियो , हामी बंकरमा लुकेर बस्थ्यौ र रुसी सेना हाम्रो नजिकै आइपुग्दै थियो, हामी उनीहरुको गोलाबारी, बम र गोलीको आवाज सहजै सुन्न सक्थ्यौ । ’
विवाहकै दिन हिटलरले गरे आत्महत्या
हिटलरले त्यसै दिन आत्महत्या गरेका थिए । जुन दिन उनले इवा ब्राउनसंग विवाह गरेका थिए । हिटलर बंकरमा बसेर प्रतीक्षा गरिरहेका थिए कि कोही आएर उनलाई बचाउनेछन् । तर एउटा कुराले उनलाई सधै घच्घच्याइरहेको थियो यदी युद्धमा उनको जित भएन भने बर्लिन कहिले छोड्ने छैनन् र आफैले आफैलाई सिध्याउने छन् । त्यसैले उनका सबै सहयोगीलाई यो प्रष्ट थियो कि हिटलर अब आत्महत्या गर्ने छन् ।
जब २२ अप्रिल १९४५ को दिन हिटलरले सबैलाई भनेका थिए यदी कोही चाहन्छन भने बर्लिन छोडेर जान सक्ने छन् , तर उनकी प्रेमिका इवा व्राउनले सबै भन्दा पहिले भनिन‘तपाईलाई थाहा छ हिटलर म तपाईलाई छोडेर कहीं पनि जाने छैन्, म यहीं नै रहने छु । ’
बदलिएका थिए हिटलर
त्यही समयमा हिटलरमा युद्द उत्पादन मन्त्री अल्बर्ट स्पियर उनीसंग भेट्न र उनीसंग सधैका लागि विदा माग्न बंकरमा आएका थिए । भेटपछि स्पियरले सबैलाई भनेका थिए हिटलर धेरै बदलिएछन् । ‘आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनहरुमा हिटलरको हालत यस्तो नाजुक बनेको थियो कि , उनी जतिखेर पनि तर्सिरहन्थे , उनको पूरै शरीर हल्लिने गरेको थियो भने काँध पनि झुकेको थियो । उनको कपडा पनि गनाउथे भने उनी आफुलाई ढाड्स हुने खालको कुराहरु मात्र सुन्न चाहन्थे ’ स्पियरले भने ।
हिटलरको त्यो समयको वर्णन ‘द लाइफ एण्ड डेथ अफ एडोल्फ हिटलर’ लेख्ने रोवर्ट पेनले पनि उल्लेख गरेका छन् । पेनले लेखेका छन् ‘ हिटलरको मुहारबाट कान्ति हटिसकेको थियो, उनी झुस्स दारी पालेर वस्थे, उनको आँखाबाट नै प्रष्ट हुन्थ्यो कि उनमा अब कुनै आशा जीवित छैन, कहिले कहिले उनको दायाँ हाथ यसरी काम्थे कि त्यसलाई रोक्न बायाँ हातले पक्रिने गर्थे ।’बंकरमा आफ्नो अन्तिम दिनहरुमा हिटलरले यो निर्णय लिएका थिए कि इवा ब्राउनसंग विवाह गरेर आफ्नो सम्बन्धलाई वैधता दिने छन् ।
भयानक बमबारी भइरहेको थियो हिटलरको विवाह हुँदा । विवाहमा हिटलरले गोएबेल्स र इवा व्राउनले बोरमनलाई आफ्नो साक्षीको रुपमा राखेका थिए । रोवर्ट पेनले अगाडि लेखेका छन् ‘ विवाहको सर्टिफिकेटमा हिटलरको हस्ताक्षर मरेको किरा जस्तै देखिएको थियो, इवा ब्राउनले पहिला विवाहमा आफ्नो नाम ब्राउन नै लेख्न चाहेकी थिइन, उनले ‘बी’ लेखेकी पनि थिइन, तर फेरि त्यसलाई मेटेर इवा हिटलर लेखेकी थिइन ।’ विवाहको सर्टिफिकेटमा तारिख लेखिएको थियो २९ अप्रिल , जुन गलत थियो , विवाहको हुँदा रातिको १२ बजेर २५ मिनेट भइसकेको थियो , जस्ले गर्दा ३० अप्रिल लेखिन आवश्यक थियो ।
विवाह पछि आयोजित भोजमा गोएबेल्स, माग्दा गोएबेल्स,जनरल क्रेब्स, जनरल बर्गडार्फ, हिटलरका दुई निजी सचिव र उनका शाकाहारी कुकहरु सहभागी थिए । इवाले कफीको श्याम्पेन पिइन भने हिटलरले पनि श्याम्पेन एक घुट्की पिए । तब उनले सबै पुराना दिनहरु सम्झदै भने ‘सबै खत्तम भयो, मलाई सबैले धोका दिए । ’
हिटलरले चलाए गोली
रोवर्ट पेनले लेखेका छन् ‘ हिटलरले प्रोफेसर हासेको बोलाएर सोधे साइनाइडको क्याप्सुलमा भरोसा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? यस्को परीक्षण उनको प्रिय कुकुर ब्लाण्डीमाथि गर्न हासेले सुझाव दिए । परीक्षण पछि हासेले हिटलरलाई जानकारी दिए ‘परीक्षण सफल भयो, ब्लाण्डी मर्नलाई केही सेकेण्ड भन्दा बढी समय लागेन । ’
हिटलर स्वयंलाई यो दृश्य हेर्ने हिम्मत भने आएन, ब्लाण्डी मरेपछि उस्लाई र उनका ६ छाउरा छाउरीलाई एक बाकसमा राखेर चान्सलरी बगैचामा लगिएको थियो । छाउराछाउरीहरु ब्लाण्डीको स्तनमा मुख जोतिरहेका थिए । त्यसपछि ती ६ छाउरा छाउरीलाई पनि गोली हानेर मारियो र नजिकैको बगैचामा गाडियो ।
साढे दुई बजे हिटलर आफ्नो जीवनको अन्तिम भोजनका लागि बसे । त्यतिखेर ओटो ग्वेंशेलाई आदेश गरियो २०० लिटर पेट्रोलको व्यवस्था गरेर बंकरको वाहिरी ढोका नजिकै राखिदिनु । तर ज्यादै मुश्किलले ग्वेंशेले पेट्रोल १८० लिटर मात्र व्यवस्था गर्न सके । भोजनपछि हिटलर अन्तिम पटक आफ्नो साथीहरुसंग भेट गरे । उनले त्यतिखेर कसैको पनि मुहारमा नहेरी
हाथ मिलाएर । जहाँ उनकी श्रीमति इवा ब्राउन पनि संगै थिए । हिटलरले गाढा निलो रंगको पोशाक लगाएका थिए भने खैरो रंगको इटालियन जुत्ता लगाएका थिए । उनको नाडीमा हिरा जडित प्लेटिनमको घडी बाँधीएको थियो । त्यसपछि दुवै जना कोठा भित्र पसे । तब एकदम ठूलो आवाजले कोही चिच्याए । माग्दा गोएबेल्स ढोकासम्म चिच्याउदै पुगिन,‘हिटलरले आत्महत्या गर्नु हुन्न, कोही छ भने हिटलरलाई यस्को कायर कर्म गर्नबाट रोक । ’
गरहार्ड बोल्टले आफ्नो किताब ‘इन द शेल्टर विथ हिटलर’मा लेखेका छन् ‘ हिटलरका अंगरक्षक ग्वेंशे ६ फिट दुई इन्च अग्ला थिए र ठ्याक्कै गोरिल्ला जस्ता देखिन्थे, म्गादा गोएबेल्स आफ्नै अडानमा अडिग थिइन र हिटलरलाई भेट्न खोजिरहेकी थिइन, ग्वेंशेले हिटलरलाई सोधे म्याग्दा भेट्न खोजिरहेकी छिन, तर हिटलरले आफु कसैलाई पनि नभेटने बताउँदै ढोका भित्रबाट बन्द गरे ।
ढोकाको ठीक बाहिर उभिरहेका हेंज लिंगेलाई थाहा समेत पाएनन कि हिटलरले आफैले आफैलाई कतिखेर गोली हाने,उनलाई त्यतिखेर मात्र यो महसुस भयो कि उनको नाकमा हल्ला बारुदको गन्ध ठोक्कियो । पछि बोरमनले हिटलरको कोठाको ढोका खोल्ने आदेश दिए । ढोका खोलेर हेर्दा हिटलरको शीर भुँईमा ढलेको थियो भने इवा ब्राउन सोफामा पल्टिएको अवस्थामा थिइन । मर्दामर्दै उनहरुले आफ्नो हाथ फैलाएका थिए जस्को कारण त्यहाँ राखिएको फुलको गमला ढलेको थियो ।
यो हृदयविदारक दृश्यले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई रुवाहएको थियो । त्यसपछि लिंगेले हिटलरको शव उठाएर कम्बलमा बेरे भने बोरमनले इवा व्राउनको शव हातमा उठाए । यो दृश्य हिटलरका अन्तिम दिनका साथीहरु सबैले हेरिरहेका थिए । पछि दुबै जनाको शवमाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाई जलाइएको थियो । एउटा क्रुर तानाशाहको यस प्रकारको मृत्युले सबैलाई रुवाएरै छोडेको थियो ।
दुई थान पस्तोलसहित एक जना पक्राउ
टुटल र पठाओले यात्रु बोके अब कारवाही गरिने
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका ३ जना कर्मचारीवरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
प्रधानमन्त्री निवास भत्काइने